Somaliland: Xaagaanka Wada Dhalasho Iyo Xurmeyn La'aanta Jabuuti !!
Somaliland: Xaagaanka Wada Dhalasho Iyo Xurmeyn La'aanta Jabuuti !! 0 July 15, 2015 in Articles by somalilandlive Staff Visits: 979
Somaliland: Xaagaanka Wada Dhalasho Iyo Xurmeyn La'aanta Jabuuti !! Somaliland:
Xaagaanka Wada Dhalasho Iyo Xurmeyn La’aanta Jabuuti !!
si qoto dheer loogu fiirayo hab-dhaqanka iyo macaamilka maamulka
jamhuuriyadda jabouti uu la wadaago Somaliland.
qof kastaaba dareemi karaa inuu yahay mid ka hooseeya oo aan u qalmin
halkii iyo heerkii laga eegayay laba dal iyo laba ummadood oo
derisnimo iyo xidhiidh wada dhalasho wadaaga, waa (Somaliland iyo
foosha xun ee laga dheehdo, qaabka ay madaxda jabuuti ula dhaqmayso jamhuuriyadda Somaliland oo dabcan ka soo bilaabmaya tan iyo
wakhtigii Somaliland ku dhawaaqday gooni isku taageeda 1991-kii, ma
aha runtii mid saacidaya xidhiidhkii dublamaasiyadeed, wada
noolaansho iyo deris wanaag ee laga filan karayay laba waddan oo
sidani oo kale ah.
maxay cadaawadda aadka u weyn ee maamulka jabuuti u qabaan dalka iyo
dadka Somaliland ? Hadmaa
la isku jiiday Nabarkan gunaadkiisu fog yahay ee Sababaya hab-macaamilka noocan ah?, Ma taariikho hore oo iyaga meel u sii tiil baa ?..Haa, waa taariikho hore ayaa laga yaabaa. Iyada wax jiris
la’aan ha eegin, kollay wax jiraba Alle iyo nebaa jira’e, wallee waxbaa jira, mise tolow waynu iska eedaynaynaaye sidani
waa ABUUR, dee waanona dhalan baa ka adag baa la yidhi.
is qancintaaas iyo weedho kale oo badan waxay ka mid yihiin, is
waydiimaha had iyo goor ku soo noqnoqda laabaha bulshada Somaliland,
iyadoo sababtuna tahay inaan ficliyan laga helin madaxda reer Jabuuti
milgihii iyo maamuuskii ay ka mudnayd SOMALILAND, gaar ahaan
taageeradii dhinaca siyaasadeed. Haddii aanay sidaasi ahayn, ma
garan karo, waxa socda ee BAL ADBA !!
la ogyahay qarnigii 20aad iyo inta qarnigan bilowga ah ee 21 aad
wax mashaakil ah oo bulshada Somaliland u geysatay Jabuuti ayaan cidina soo werin.
u geysato haba joogtee, sida taariikhdu ina barayso ummadda
Somaliland hiil iyo hooba waxay ahayd tu la barbar istaagtay
dalkaasi iyo dadkiisaba, xilli halgameedkii ay ku hoos jireen
mustacmaradii Faransiiska si ay uga gilgishaan taasi oo rabbina ku
guuleeyay kolkii danbe.
markhaati ma doon ah in xataa suugaaanta oo RUKNI wayn oo
wacyigelineed ahayd, aanay hal abuurka Somaliland kala masuugin
dalkaasi xilligii xorriyad doonka, Iyagoo hal- abuuray heeso badan oo isugu jira Soomaali iyo Canfariba, kuwaasi oo ay u hibeeyeen halgankaasi, wakhti xaadirkan-na ayba ku kaydsan yihiin Idaacadda
RADIO HARGEISA, Tiiyoo ay si dareenka taabanaya ugu luuqayn jireen Fanaaniintii waaweynayd ee kooxdii Radio Hargeisa, ee sanadihii 60
naadkii iyo horraantii 70-naadkii.
badan ayaa mujtamaca Somaliland ay reer Jabuuti u ahaayeen wehelka keliya ee ay waaceensadaan, ku xisaabtamaan isla-markaasina
Nusqaanta xambaarsan, ku xumeeda xambaarsan, ku jiqsiida xambaarsan,
nacaybka xambaarasan ee ka imanaya dhanka madaxda Jabuuti 30kii
sanadood ee la soo dhaafay, Haddii ay sii socdaan, ma aha macaamil
caafimaad ka dhex abuuraya bulshada labada dhinac, taariikhdana waa
wax ugu xardhanaan doona.
iyo timaadada ayaanan qabaa in Axwaashaasi aynu ka soo hadallay ee
labada dhinac ay noqon doonto arrin xiisaheeda yeelata, maxaa yeelay
Somaliland waa dal iyo dad hore u jiray, magaca Soomaali inta
sheegata waa dadkii ugu horreeyey ee calan iyo xorriyad qaata,
gadaalna waa dal iyo dad jiri doona haddii Allaah yidhaahdo.
la isku tidco hab-dhaqanka xidhiiidhka Somaliland iyo Jabuuti ee
dhinaca Diblamaasiyadda taban wakhti xaadirkan Iyo falalkii dibin
daabyo ee waayihii tegey, Waxa qof kasta oo dammiirkiisu nool yahay
dareemi karaa dedaalka maamulka Jabuuti ugu jiro fogaynta Somaliland
iyo caashaqa ay u qaadday cid aan rabin.
cuskiyo falanqayntayda tusaale dhow: Madaxda
reer Jabuuti iyagoo ogsoon cadaawada ka dhaxaysay taliskii Siyaad
Barre iyo dadkii isir ahaan loo tirinayay beelihii taageersanaa SNM.
ay magan gelyo ka siin lahayd dadkii walaalahooda ahaa oo nacab aan bixinaynin ka firxanaya, kolkii ay Jabuuti miciin bideen
dagaalladii 1988-kii waxay qaadeen tallaabo ay kaga soo raafayaan
maamulkii Jabuuti, gudaha magaalada Jabuuti, iyagoo gacanta u soo
gelinaya ciidamadii taliskii dhiig-ya cabka ahaa ee Siyaad Barre ee
murugo iyo maalmo madaw ahaa in dadkaasi aan waxba galabsan ee raafka
lagaga soo saaray Jabuuti kolkii loo gacan geliyay faqashta saacado
ka dib inta wixii haween ahaa laga soocay, dhammaan raggii oo dhan
rasaas lala dhacay. Waxaan xasuustaa xiliyadaas sidii dareenka
naxdineed looga muujiyey dhacdooyinkaasi iyo sidii loogu
idaacadda BBC-da oo wakhtigaasi ahaa beryihii sida aadka ah ay u
shidnayd, waraysiyadii iyo baadhistii dhacdooyinkaasi ay kala yeelatay madax badan oo reer Jabuuti ah oo uu ka mid yahay wasiirul daakhiligii dawladdii Xasan Guuleed Abtidoon iyo
dhanbaalladii qoraalka iyo codka cajaladaha lagu duubo-ba lahaa ee
qaybo ka mid ah dadkii goob joogga ama eheladooda lagu dilay kaga war bixinayeen.
xanuunka badan ee RAAFKA DADKA Iyo xasuuqa daba yaalla, waxay laanta afka Soomaliga ee BBC-du si joogto ah ugu qaadaa dhigi
jireen, barnaamijyadoodii xiligaas oo uu TODOBAADKA IYO AFRIKA ka
mid ahaa oo bixi jiray toddobaad kasta maalinta Arbacada
garo oo kolka ay maamulka Jabuuti sidaasi door bidayaan docda kale
dalka Ethiopia, muxuu yeelay? Miyaanu noqon hoygii guusha iyo
badbaada Somaliland, kolkuu saldhiggii halgankana ahaa, hab-qankii maatiduna nafta kula eeratay iyagoo ku helay nolol iyo
caqliga saliimka ahi odorosayaa sida Afcaasha aan u jajabnayn jiritaanka Ummadnimo iyo hadafka goonni isu taagga Somaliland ee ay laasimeen maamulka Jabuuti uu saamayn taban ugu yeelan karo cudur
aan dawo lahayn oo raadeeya mustaqbalka danbe quluubta bulshada labada dhinac, dhaxalka ay u reebeen hoggaankoogu awgeed.
waxay tidhaahdaa, GASHI
mar kalena, waxay tidhaahdaaSIDAAN
KUUGU LISAY IIGUMAAD HANBAYN.
dafiri karo oo Dabcan imikaba wuu jiraa xidhiidh u dhexeeya
labada dhinac, Xurmo, soo dhoweyn iyo deris wanaag wuu iska jiri
karaa, maaha taasi amuur lagu tilmaami karo xidhiidh si khusuusiya madaxda Jabuuti ugu sed burinayaan Somaliland, si ka duwan
xidhiidh ku arooraya xeerka dhaqan Soomaaliga, xaagaanka wada
dhalasho iyo xididnimo ee Sooyaalka u ah bulshada Soomaalida.
kastaba ha ahaatee cadaadiska dhinaca dublamaasiyadda ee labadii
xukuumadood ee u kala dambeeyey Jamhuuriyadda Jabuuti ay ku
adkaysteen inay saaraan Somaliland, ma aha wax qarsoon bulshada
Somaliland-na way u jeeddaa sida wax u dhacayaan. Iyadoo waxa
keliyaata ee sababay inay Somaaliland qaabkaasi ula dhaqantaana uu
yahay inay Somaliland tahay dawlad gobanimadeedii la soo noqotay gaarkeedana maanta u taagan.
nasiib darro madaxda Jabuuti hilmaameen inay iyagu yihiin kuwii bilaabay inay gooni uga go’aan Soomaaliya inteeda kale 1977-kii,
waxaanse odhan lahaa haddaad caashaqsan tihiin midnimo Soomaaliyeed
soo diyaar garooba, shantii Soomaaliyeed ayaa la isla baadi
goobayaaye, waayo dee adiguba shantaasaad ka mid ahayd oo loo kala
hadhi maayee (Miidaan waasac…)
Cali Axmed Cawaale (Cali Caano Dhame)
Soco Qaybta 2-aad oo aad u xiiso Badan Iyo Xogo kale oo ku duugan.